WatchOS 6.1.1 betas ikozvino yavapo. uye tvOS 13.3 | Ndinobva mac
WatchOS 6.1.1 betas ikozvino yavapo. uye tvOS 13.3
Sezvo mwedzi inopfuura, kubva kuCupertino, ivo vanoramba vachimisikidza nyowani dzekuvandudza dzese mashandiro masisitimu atinogona kuwana parizvino pamusika, zvese paMac, pamwe neiyo iPhone, Apple Watch uye tvOS. Iyo jackpot yechinguvana, maererano nenhamba yenhamba, inoenda kune iOS iine zvingangoita gumi zvakagadziriswa kubvira payakatangwa.
Izvi zvinoita kunge zvakamanikidza kambani yaTim Cook ku ita kuburitswa kweshanduro dzeIOS dzakasununguka kubva kune mamwe masisitimu anoshanda, kunyanya macOS, nekuti pakupedzisira, iOS zvidzoreredzo zvine hukama kune ese ari maviri watchOS uye tvOS, kunyangwe padiki padiki. Kubva nezuro, vashandisi veIOS, tvOS uye watchOS vatove nebeta nyowani yavanowana.
Kwemaawa mashoma, Apple yagadzira kuwanikwa kune vanogadzirabeta nyowani yewatchOS 6.1.1, inotevera yekuvandudza iyo Apple Apple ichagamuchira. Iyi vhezheni, sevaya vese vakaburitswa mumahofisi eApple, inongowanikwa kune vanogadzira, uye parizvino icharamba ichidaro mune ramangwana, nekuti hatigone kuibatanidza netambo kukombuta kuti iidzorere kubva kufekitori mu nyaya iyo beta isingashande nemazvo.
Kana zviri zveApple TV, iyo beta iyo iripo parizvino iri mumagazini 13.3, beta inotarisana nayo kunatsiridza kuita kwechigadzirwa uye chengetedzo, uye kuti haina kuronga kuwedzera chero hutsva mashandiro kunze kwekuvandudza iwo akauya nekuvhurwa kwetvOS 13, ayo aive mashoma kwazvo.
Kana iwe uri mushandisi weiyo macOS Catalina 10.15.2 betas, iyo yatiri ikozvino, isu tichafanirwa kumirira Kusvikira svondo rinouyaKana isu tichifunga izvo kubva kuCupertino ivo vatangisa matatu ekutanga mabheji nemusiyano wevhiki imwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 6.1.1 betas ikozvino yavapo. uye tvOS 13.3
Apple TV + haisi kutepfenyura mamwe akateedzana muDolby Vision HDR